ပုဂံရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု ဒေသမှာ ဌာပနာကို ဖွင့်ဖောက်ခံ ထားရသည့် ဘုရား ၃၃ ဆူအထိတွေ့ရှိ ရပြီဆိုတော့…. – Myanmar Update News
News-Update | June 11, 2020 | Local News | No Comments
ပုဂံရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုဒေသမှာ ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့အထိ ဌာပနာဖွင့်ဖောက်ခံရတဲ့ စေတီပေါင်းဟာ ၃၃ ဆူအထိ တွေ့ရှိလာရကြောင်း ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသား ပြတိုက်ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခွဲ)က စုံစမ်းသိရပါတယ်။
အမျိုးသား ပြတိုက်ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခွဲ) ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာ သန်းထိုက်က “လတ်တလောတော့လည်း မဟုတ်ဘူး။ အရမ်း ကြီးလည်း မကြာသေးဘူး။ ကျနော်ထင်တာတော့ အပေါ်ပိုင်း ဌာပနာတချို့ပစ္စည်း ရသွားပြီးတော့ အောက်ပိုင်းတွေ ဆက်မလုပ်တာလားလည်း မပြောတတ်ဘူး။
အခုကျန်ခဲ့ တာတွေကလည်း တန်ဖိုးရှိ ရွှေထည်ပစ္စ ည်းလိုဟာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီအထဲမှာလည်း ကောက်ရိုးတွေနဲ့ ငှက်သိုက်တို့ မြွေအရေခွံတို့လည်းတွေ့တော့ ဖောက်ပြီးပစ်ထားတာ သိပ်မကြာ လောက်သေးဘူး။ လပိုင်းတွေလောက်ပဲ ရှိမလား၊ သိပ်သေခြာတော့ မသိသေးဘူး” လို့ ပြောပါတယ်။
ပုဂံရှေးဟောင်းဒေသမှာ ဘုရားဌာပနာကွမ်းတောင်တွေ ပေါက်နေကြောင်း ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့က ၅ ဆူကို စတင်တွေ့ရှိပြီး နောက် ဇွန် ၉ ရက်မှာ နောက်ထပ် ၁၄ ဆူ၊ ဇွန် ၁၀ ရက်မှာ ၁၄ ဆူ ဆက်လက်တွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့် စုစုပေါင်း ၃၃ ဆူအထိ ရှိလာကြောင်းသိရပါတယ်။
ပုဂံရှေးဟောင်းသုတေသနအဖွဲ့နဲ့ ပူပေါင်းပြီး စေတီပုထိုးများ စောင့်ရှောက်ရေးကို ကူညီ ပေးနေတဲ့ ပုဂံဒေသ ဧည့်လမ်းညွှန် အသင်းက အလုပ်အမှု ဆောင် ကိုမြင့်နိုင်က “တွေ့နေဦးမှာပဲ၊ ရိပ်စားမိသွားပြီဆိုတော့ကာ။ ဒီနေ့တွေ့တဲ့ တစ်ဆူမှာ ရှေးဟောင်းနဲ့ သွားတော့ သူယူမသွားဘဲ ကျန်ခဲ့တဲ့ ဌာပနာပစ္စည်းကိုတွေ့တာပဲ။
သူတို့က အုပ်စုလေးနဲ့ လုပ်နေတဲ့သဘော။ ကွမ်းတောက်မှာ အပေါက်သေးလေးဖောက်ပြီး လက်နဲ့ နှိုက်ယူတယ်။ ကြီးတဲ့ပစ္စည်း တွေကြတော့ ချန်ထား ခဲ့တယ်။ ထပ်တွေ့ဦးမယ်တော့ ယူဆတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
စေတီတွေ ဌာပနာဖောက်ခံရတဲ့ကိစ္စ မနေ့က ခရိုင်အဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတွေ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ ဌာပ နာဖောက်ထွင်းခံရတဲ့ ဖြစ်စဉ်အားလုံးကိုလည်း ပုဂံနယ်မြေရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်ထား တယ်လို့
ရှေးဟောင်း သုတေသနနှင့် အမျိုးသား ပြတိုက်ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခွဲ)က သိရပါတယ်။ ပုဂံရှေးဟောင်းယဉ် ကျေးမှုအမွေအနှစ် ဇုန်ဟာ ၄၃ ကီလိုမီတာလောက် အကျယ်အဝန်းရှိပြီး ဘုရားစေတီပေါင်း ၃၀၀၀ ကျော်လောက် ရှိတာပါ။ သတင်း- ကိုလင်း(ချောက်)
(Unicode version) ပုဂံရှေးဟောငျး ယဉျကြေး မှု ဒသေမှာ ဌာပနာကို ဖှငျ့ဖောကျခံ ထားရသညျ့ ဘုရား ၃၃ ဆူအထိတှရှေိ့ ရပွီဆိုတော့….
ပုဂံရှေးဟောငျးယဉျကြေးမှုဒသေမှာ ဇှနျလ ၁၀ ရကျနအေ့ထိ ဌာပနာဖှငျ့ဖောကျခံရတဲ့ စတေီပေါငျးဟာ ၃၃ ဆူအထိ တှရှေိ့လာရကွောငျး ရှေးဟောငျး သု တသေနနှငျ့ အမြိုးသား ပွတိုကျဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခှဲ)က စုံစမျးသိရပါတယျ။
အမြိုးသား ပွတိုကျဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခှဲ) ညှနျကွားရေးမှူး ဒေါကျတာ သနျးထိုကျက “လတျတ လောတော့လညျး မဟုတျဘူး။ အရမျးကွီးလညျး မကွာသေးဘူး။ ကနြျောထငျတာတော့ အပျေါပိုငျး ဌာပနာတခြို့ပစ်စညျး ရသှားပွီးတော့ အောကျပိုငျးတှေ ဆကျမလုပျတာလားလညျး မပွောတတျဘူး။
အခုကနျြခဲ့ တာတှကေလညျး တနျဖိုးရှိ ရှထေညျပစ်စညျး လိုဟာမြိုး မဟုတျဘူး။ အဲဒီအထဲမှာလညျး ကောကျရိုးတှနေဲ့ ငှကျသိုကျတို့ မွှအေရခှေံတို့လညျးတှတေ့ော့ ဖောကျပွီးပဈထားတာ သိပျမကွာ လောကျသေးဘူး။ လပိုငျးတှလေောကျပဲ ရှိမလား၊ သိပျသခွောတော့ မသိသေးဘူး” လို့ ပွောပါတယျ။
ပုဂံရှေးဟောငျးဒသေမှာ ဘုရားဌာပနာကှမျးတောငျတှေ ပေါကျနကွေောငျး ဇှနျလ ၈ ရကျနကေ့ ၅ ဆူကို စတငျတှရှေိ့ပွီး နောကျ ဇှနျ ၉ ရကျမှာ နောကျထပျ ၁၄ ဆူ၊ ဇှနျ ၁၀ ရကျမှာ ၁၄ ဆူ ဆကျလကျတှရှေိ့ခဲ့တာကွောငျ့ စုစုပေါငျး ၃၃ ဆူအထိ ရှိလာကွောငျးသိရပါတယျ။
ပုဂံရှေးဟောငျးသုတသေနအဖှဲ့နဲ့ ပူပေါငျးပွီး စတေီပုထိုးမြား စောငျ့ရှောကျရေးကို ကူညီ ပေးနတေဲ့ ပုဂံဒသေ ဧညျ့လမျးညှနျ အသငျးက အလုပျအမှု ဆောငျ ကိုမွငျ့နိုငျက “တှနေ့ဥေီးမှာပဲ၊ ရိပျစားမိသှားပွီဆိုတော့ကာ။ ဒီနတှေ့တေဲ့ တဈဆူမှာ ရှေးဟောငျးနဲ့ သှားတော့ သူယူမသှားဘဲ ကနျြခဲ့တဲ့ ဌာပနာပစ်စညျးကိုတှတေ့ာပဲ။
သူတို့က အုပျစုလေးနဲ့ လုပျနတေဲ့သဘော။ ကှမျးတောကျမှာ အပေါကျသေးလေးဖောကျပွီး လကျနဲ့ နှိုကျယူတယျ။ ကွီးတဲ့ပစ်စညျး တှကွေတော့ ခနျြထား ခဲ့တယျ။ ထပျတှေ့ဦးမယျတော့ ယူဆတယျ” လို့ ပွောပါတယျ။
စတေီတှေ ဌာပနာဖောကျခံရတဲ့ကိစ်စ မနကေ့ ခရိုငျအဆငျ့ အစညျးအဝေးပွုလုပျခဲ့ပွီး လုံခွုံ ရေးလုပျငနျးတှေ တိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျသှားဖို့ စီစဉျနပေါတယျ။ ဌာပ နာဖောကျထှငျးခံရတဲ့ ဖွဈစဉျအားလုံးကိုလညျး ပုဂံနယျမွရေဲစခနျးမှာ အမှုဖှငျ့ထား တယျလို့
ရှေးဟောငျး သုတသေနနှငျ့ အမြိုးသား ပွတိုကျဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခှဲ)က သိရပါတယျ။ ပုဂံရှေး ဟောငျးယဉျ ကြေးမှုအမှအေနှဈ ဇုနျဟာ ၄၃ ကီလိုမီတာလောကျ အကယျြအဝနျးရှိပွီး ဘုရားစတေီပေါငျး ၃၀၀၀ ကြျောလောကျ ရှိတာပါ။ သတငျး- ကိုလငျး(ခြောကျ)
သတိထားရန် မြန်မာပြည်သို့ မုန်တိုင်းဖြတ်သန်းမည့် ဒေသမျာ